China FOTON C10 / C12 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Foton
C10 / A12
Curb arọ 12T
Njem / Njikwa ikike 92 / 24-46
Ntọala Ntọala Ntinye-ala / Ala-ala / Nzọụkwụ abụọ
Nhazi nhazi ụzọ Abụọ na-na siwing abụọ nku ụzọ
Usoro a jikọtara engines na-ezute ọkọlọtọ EURO II na ọkọlọtọ EURO V;
Dizel / NG engine dị
Usoro a kwekọrọ na nnyefe dị iche iche sitere na ntinye aka na nnyefe akpaka;
Gụnyere nnyefe ZF AllisionVoith Diwa.
Na 2017, Foton AUV nyefere 1000 ike ụgbọ ala dị ọcha na ụlọ ọrụ ụgbọ ala Yangon na Myanmar, na-emezu nnukwu iwu na ụlọ ọrụ ụgbọ ala china.
Busgbọ ala Foton na-aga nchọpụta ụgbọ ala siri ike na nnwalegharị ihe karịrị 100 puku kilomita na ọnọdụ nke ụdị ụzọ dị iche iche na n'okpuru ọnọdụ ihu igwe kachasị njọ dịka oke okpomọkụ, obere okpomọkụ na nrụgide dị ala.